Rate : 1.315
BXD : 1.345
Xawaaladda Iftin Express oo horumar ku talaabsatay
Xawaaladda Iftin Express waxay ku talaabsatay horumar baaxad leh muddadii ay jirtey,sida ka muuqata magaca shirkadda ee Iftin Express, waxaad lacagtaada ku dirsan kartaa si fudud iyada oo ku gaarsiinaysa halkii loo direy wax ka yar shan daqiiqo.
Shirkadda Iftin Express waxa ay kuu samayneysaa xiliyada qaarkood qiima dhimis, taas oo aad ka ogaan kartid xarumaha shirkadda, sidoo kale shirkaddu waxa ay ka qaybqaadataa adeega bulshada, iyada oo aan wax khidmad ah ka qaadin lacagaha danta guud sida Zekada iyo waxyaabaha loogu tabaruco agoomaha iwm. Xawaaladi waa iftin, Daacadnimo, Deg-deg iyo hawlkarnimo ugu hagaag Iftin Express.
IFTIN BANK Iftin Express ayaa daaha ka qaadey qorshaha cusub ee Xawilaada kaas oo noqon doona mid ku shaqeysa sida Bangiyada caalamiga ah isla markaana waxa ay deegaanada Puntland iyo guud ahaan deegaanada Soomaalida ka hirgelineysaa dhismayaashii ugu bilicda sanaa ee abid laga dhiso halkaas, Banigaga ayaa ku shaqeyn doona shuruucda Islaamka iyo weliba xeerarka caalamiga ah.
Waxyaabaha cajiibka ah ee Iftin Bank wato waxaa kamid ah marka Bangigu xiran yahay uma baahnid in aad sugto, ee waxaad lacagtaadi si aayar ah ugala bixi kartaa derbiga Bangiga halkaas oo aad ka heli doonto Mashiinka lacagta ee ku shaqeeya Kaararka Iftin Bank, sidoo kale waxaad Mashiinkaas isticmaali kartaa marka Bangigu furan yahay.